DVD on Wii - Sida loo Play DVD on Wii
> Resource > DVD > waxaad ka ciyaari kartaa DVD on Wii - Haa, waxaad samayn kartaa
c All aad u bahan tahay kaarka SD ah oo ka socda free download.
Ma doonaysaa in ay daawadaan DVD aad Wii, laakiin ma doonayo in aan isku dayo qaar ka mid ah Galaydh nooca-MacGyver adag in murjisay la dhiiranaan aad Wii ee? Isku day Wondershare ku Video Converter lacag la'aan ah. Waxaa ka mid ah Wii qaab video filaayo in kuu ogolaanayaa inaad badalo DVDs tayo sameecadda xaq u leedahay in aad kaarka SD Wii-socon. Halkan nuqul ka mid tijaabo lacag la'aan ah iyo saddex tallaabo gaaban aad hoos ku qoran u baahan tahay:
Ka dib markii la rakibey deg deg ah, waxaad u baahan tahay oo dhan si uu u bilaabi waa laba guji toobiye desktop-ka.
Talaabada 1: Beddelaan files DVD ee Wii tacsiyeeyaan
Talaabada 2: Dooro qaab video Wii oo guji badalo
Talaabada 3: Koobiyee faylka (s) si aad SD Card & waxa Play!
Su'aalaha ku saabsan SD Cards iyo Wii?
Ku rid DVD ah, ka dibna riix DVD Load , sida sawirka hoose. Ka dhig loading DVDs dheeraad ah haddii loo baahdo; DVD in Wii Converter kuu ogolaanaysaa inaad loogu badalo tan oo files waqti la diinta Dufcaddii.
Ka dib markii files oo dhan ay ku raran yihiin, iyaga oo dhan dooro adigoo riixaya Ctrl + A (ama Command + A ee Mac), ka dibna riix Qaabka Output ' hoos-hoos menu s sida sawirka hoose ka dooro Device> Game> Wii . Markaas riix buluug weyn loogu badalo button oo taga sameeyo rooti ama wax. Video Converter Ultimate Wuxuu qaadanayaa dhowr daqiiqo si loogu badalo DVD feature-dherer ah maxaa yeelay waxa ay ka dhabayso la eber tayada khasaaro . Marka aad u soo noqoteen, waxaad arki doonaa filimaan aad loo bedelay ka DVD ah in a video Wii-socon!
Ka dib qaab beddelidda, aad si fudud u nuqul ka kartaa cusub aad file video Wii-socon (s) si toos ah u gal card SD aad. Marka files waxaa kaalinta koobiyeynta, kaliya saarto card SD ka your computer, waxaa soo shirtagi in Console ah, dib u fadhiisan oo aad diyaar u ah inay ku raaxaystaan ​​DVD aad ku Wii!
Waxaa laga yaabaa in aad dhibaato ciyaaro ee la gediyay videos on card SD aad? Waxaad aadan aqoon oo noocee ah ee Card SD in aad u baahan tahay. Si kastaba ha ahaatee, xiriiriye waa inay caawiyaan si ay u cadeeyo aad u.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah Resources SD Card ee Nintendo ee:
Liiska Cards SD socon - u yeelan doontaa in ay helaan tafaasiisha ku saabsan kaararka SD kala duwan iyo sidoo kale wuu Hanuuniyaa ee ku saabsan sida loo shuban iyo waxyaabaha ay kala soo wareegeen card SD Waxaad.
Isticmaalidda Wii ee Menu SD Card - qaad ah safarada dhowr ah oo sida aad nuqul karo ama badbaadin xogta in kaarka SD ah.
Wii Dhibaatooyinka SD Card - hel kaalmo ku dhib; tusaale ahaan oo fariin u baadi, qofka xukuma, nidaamyada iyo wax ka badan.